कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज भदौ ५, बिहीबारको राशिफल ! - PUBLIC AAWAJ-पब्लिक आवाज
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज भदौ ५, बिहीबारको राशिफल !
प्रकाशित : बुधबार, भदौ ०४, २०७६२२:४२ पब्लिक आवाज /संवाददाता
अत्यावश्यक निर्णयको लागी अति उत्तम दिन रहेको छ । सृजनात्मक शक्तिमा वृद्धि हुनेछ । वैचारिक दृढता एवम् मानसिक स्थिरताको कारण कार्य सफलतामा सरलता हुनेछ । जिवनसाथीको पूर्ण सहयोग मिल्नेछ । कुनै पर्यटन स्थलको घुमफिरले मन अति प्रशन्न रहनेछ । स्वजनको साथ निकटता बढ्नेछ । सामाजिक प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ ।